Mmekọrịta Mmekọrịta site na iji TWIKI
Tuesday, July 17, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Enweghi ike ikwuputa odi nkpa nke odi nfe na ikwurita okwu, karisia nke oge a karia mpi ebe otutu, nkwenye na ndi okacha amara bu ihe ngba nke oma. Ma otutu ulo oru na aru oru na “omenaala igba” nke anaghi agba ndi mmadu ume ikesa ozi n’obe
Ngwaọrụ dịka Twiki na-enyere ụlọ ọrụ aka ịpụ ụdị ọdịbendị ndị a anaghị emekọ ihe ọnụ.
TWiki® bụ mgbanwe na-agbanwe agbanwe, dị ike, ma dịkwa mfe iji wiki ụlọ ọrụ, ikpo okwu mmekorita ụlọ ọrụ, yana ikpo okwu ngwa weebụ. Ọ bụ Wiki ahaziri ahazi, nke a na-ejikarị na-agba ọsọ oghere mmepe, sistemụ njikwa akwụkwọ, isi ihe ọmụma, ma ọ bụ ngwa ọrụ ọ bụla ọzọ, na intranet, extranet ma ọ bụ ịntanetị.
TWiki bụ n'ezie wiki ahaziri ahazi, nke na-arụ ọrụ dị ka ọkwa ụlọ ọrụ Wikipedia ma ọ bụ netwọkụ na-elekọta mmadụ na ntanetị, dabere n'otú ụlọ ọrụ ahụ si ahọrọ iji ya. Ndị njikwa nwere ike iji ngwá ọrụ a iji melite ọrụ, jikwaa akwụkwọ, ịtọlite ​​intranet, ma ọ bụ ọbụna ngwa weebụ. Twiki na-enyekwa ohere maka nhọrọ dị elu dịka Transclusion ma ọ bụ itinye akwụkwọ ma ọ bụ akụkụ nke dọkụmentị n'ime akwụkwọ ọzọ site na ntụaka, nweta eserese na ọtụtụ ohere ndị ọzọ.
Deploying Twiki dị ka ikpo okwu nkwado na-eme ka ozi dịịrị ndị chọrọ ya. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịnweta Twiki ma nweta ozi achọrọ ozugbo, ma ọ bụ kpọtụrụ onye ikike ikike na oge, na-ebelata oge ndụ ndụ nke ukwuu. Hazi usoro dị n'ime site na Twiki na-eme ka data na ozi dị nro na enweghị ntụpọ, na-enye aka na ụba arụpụta na oge ndu mkpụmkpụ.
Twiki na-bụ emeghe ikpo okwu ha nwekwara azịza akwadoro. Maka ndị chọrọ enyemaka teknụzụ, Twiki na-enye ndị ahụ ọrụ ndị ndụmọdụ onye ga-ahazi, lekọta ma hazie Twiki.
Tags: mmekotammekorita oruotu mmekotaTwikiwiki
Are Bụ Ngwaahịa nke Facebook